June 3, 2019 - BaHuThuTaGabar
ဘယ်အစိုးရတက်တက် ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရတာဆိုသူများ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက မိန့်ကြားထားတာလေး ဖတ်ကြည့်ပါ ….
ဘယ်အစိုးရတက်တက် ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရတာဆိုသူများ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက မိန့်ကြားထားတာလေး ဖတ်ကြည့်ပါ …. ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရ မယ်။ မဲသွားပေးစရာ မလိုပါဘူး ဆိုတဲ့ သူတွေလည်းရှိတယ်။ သာ မန်အားဖြင့် ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဟုတ်သလို ထင်ရတာပေါ့နော် …။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရ မယ်ဆိုတဲ့ […]
ဆီးချိုကို …အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းစေတဲ…့ ဆီးဖြူသီး (၁၀)လုံးနှင့်် ငါးရံ့ (၁၀)ကျပ်သား ” ဆီး ချို​ရော ဂါေ ဝဒနာ အမြစ်​ပြတ်​သက်​သာ​ပျောက်​ကင်း​​စေတဲ့နည်း ​တစ်​ ပတ်​( ၁)ကြိမ်​ (၃)ကြိမ်​စားပြီးပါက ဆီး ချို ​ရောဂါ အ​ခြေ​နေကို ပြန်​လည်​စမ်းသပ်​ရန်​ (၆)လခွဲ စွဲစားပါက အမြစ်​ပြတ်​​ […]
အရမ်းကို ချစ်တတ်ပေမယ့် အချစ်ရေးမှာ ကံမကောင်းဘူးဆိုတာ ဒီအချက်(၅)ခု ကြောင့်ပါ အရမ်းတော့ချစ်တတ်ပေမယ့် အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် ဘယ်တုန်းကမှ ကံမကောင်းခဲ့တဲ့ လူတစ်မျိုးရှိပါတယ်နော် အဲ့ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ဘက်ကချို့ယွင်းချက်ရယ်လို့မရှိပေမယ့် ဘာကြောင့်အချစ်ရေးကံမကောင်းရတာလဲဆိုတာ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း နားမလည်နိုင်သလို၊ ဒီအတွက် အဖြေလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ အဲ့ဒီအချက်အတွက် အဖြေရှိလာပါပြီ။ သင့်အနေနဲ့ အရမ်းချစ်တတ်ပေမယ့် […]
“အိမ်ထောင်ရေး သက်တမ်း ခိုင်မြဲအောင် ရှောင်ရှားသင့်တဲ့အရာများ….”
အိမ်ထောင်ရေး ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ၁။ လူရှေ့သူရှေ့ မရှောင် အိမ်ထောက်ဘက်ကို အပြစ်တင်ခြင်း လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွားပါ။ အိမ်ထောင်သက် ရလာတာနဲ့ အမျှ အထစ်အငှော့လေးတော့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ လူရှေ့သူရှေ့ မရှောင် တဘက်သားကို အပြစ်တင် ရန်ထောင်ရင်တော့ ရန်ပွဲ ဖြစ်လာမှာပါ။ အဲလိုရန်ဖြစ်တာ ပြဿနာကို ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်း […]
ချစ်​သူရည်းစားထားတယ်​ဆိုတာက တကယ်​​တော့ ကိုယ့်​သိက္ခာနဲ့အချစ်​ကို အလဲအလှယ်​လုပ်​လိုက်​တာပါပဲ ….. “သိက္ခာရှိရှိ ချစ်​ပါ” ချစ်​သူရည်းစားထားတယ်​ဆိုတာက တကယ်​​တော့ ကိုယ့်​သိက္ခာနဲ့အချစ်​ကို အလဲအလှယ်​လုပ်​လိုက်​ရတာပါပဲ … ချစ်​သူရည်းစားထားတယ်​ဆိုတာက ​ယောင်္ကျား​လေးဖြစ်​ဖြစ်​ မိန်းက​လေးဖြစ်​ဖြစ်​ နှစ်​ဖက်​စလုံး နစ်​နာတာပါပဲ…….။ ကိုယ့်​ဂုဏ်​သိက္ခာကို ရင်းနှီးပြီး ချစ်​ခြင်းကြတာချင်းအတူတူ အခန့်​မသင့်​လို့ လမ်းခွဲခဲ့ကြရရင်​ … တစ်​​ယောက်​ကို တစ်​​ယောက်​ […]
“ဒီလို အဖြစ်တွေ ကြုံနေရပြီဆိုရင်တော့ သင့်ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်သင့်ပါပြီ”
ဒီလို အဖြစ်တွေ ကြုံနေရပြီဆိုရင်တော့ သင့်ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်သင့်ပါပြီ အချစ်ရေးတိုင်းဟာ အမြဲတမ်းတော့ လွယ်ကူချောမွေ့မနေပါဘူး။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်က ကြိုးစားမှုလေးတွေ အများကြီးလိုတဲ့ အပြင်ကို မိန်းကလေးဖက်ကလည်း လုပ်ရမယ့် တာဝန်လေးတွေရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ဖြစ်သင့်ပါတယိ။ ဒါပေမယ့် ခုဖော်ပြမယ့် အရာတွေကိုပါ သင်လုပ်နေရတယ် ဆိုရင်တော့ ဒီလူဟာ ဆက်တွဲဖို့ မသင့်တော့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ […]